rafozan-doza | Jiona 2011
Tsy te hiresaka ny hoe fihavanana ah an. En fait, zavatra utopika be sy mitovy @ le fitiavan-tanindrazana ihany io hoe ideologie nisy tany @ taonjato faha18 tany hoany dia roritina @ izao fotoana kanefa efa nilaozan'ny toetr'andro be... efa tsy zavatra ihainana intsony ee, otran'ny FFKM ihany. Tsisy ilana azy
Dia izay ee, iangaviko mba samy hieritreritra isika hoe inona no tena mba maha-Malagasy. Rehefa mitovy ny valin'io sy samy mahatsapa izany angamba dia mety hivavaha hoazy ny krizy...
Ny tonga any antsaiko voalou izao dia ny hoe ny gasy dia... tia mahaleo... tsy mbola nahita malagasy ka hoe tsy mirevy mahaleo izany mihintsy ah... en fait, ny hoe citizenship test of Madagasikara na hoe fanadinana hizakana ny zom-pirenana malagasy tokony ho simplifier-na fotsiny @ fanotaniana roa hoe:
* Fantatrao ve mahaleo?
* Hirao ny mimoza?
-> arabaina, fa voaray ho Malagasy ianao
06/26,2011 Sokajy Dago